नार्कोननको सफलताको भिडियो - लिबर्टी बी.
नार्कोनन आउनुअघि म एउटा खराब बानीको मानिस थिए। म नशालु पदार्थ प्रयोग गर्थें। मैले चक्की लिन सुरू गरे र पछि बिस्तारै प्रत्येक दिन सुँघेर नशा लिन थाले। उठ्नेबित्तिकै म त्यहीँ खोज्थे। हरेकपटक म आफैलाई यो अन्तिम पटक हो, अब देखि सेवन गर्दिन भनेर भन्ने गर्थे।
मैले मेरा बालबच्चा, परिवार सबै गुमाए तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मैले आफैलाई गुमाएको थिए।
नार्कोनन आएपछि, यो ठाउँले मलाईं नशालु पदार्थको सेवनबाट बाहिर ल्यायो-- मलाईं साँच्चिकै सहयोग चाहिएको थियो किनकि म एक्लैले गर्न सक्दिनथे। र यो ठाउँले मेरो जीवन बचायो – साँच्चिकै मेरो जीवन बचायो।
अहिले मैले आफ्नो मनभित्र 'हे ! तिमी फेरि यो प्रयोग गर्दैछौ“ भन्ने आवाज आउँदैन। अब ममा त्यस्तो छैन। म अहिले लागुऔषध रहित जीवन बिताउन सक्छुँ जुन म पहिला गर्न सक्दिनथे।
यो ठाउँले तपाईंलाई कुलतबाट छुँट्कारा पाउनमा मद्दत गर्नुका साथै फेरि जीवन जिउने तरिका सिकाउँछ।
त्यसको लागि म यस कार्यक्रमलाईं धन्यवाद दिन चाहन्छुँ, म अहिले खुशी छुँ, स्वतन्त्र छुँ र लागुपदार्थ रहित जीवनको आनन्द लिन सक्छुँ। अहिले मसँग मेरा छोराछोरी छन्, परिवार छ र म आफै पनि पहिले जस्तै भएको छुँ।